Ny 26 jona dia fetin’ny fahaleovantena izay nosalorana ho fetim-pirenena noho ny fahamaritan’ny ny didy amann-dalana. Ny tokony ho fetim-pirenena dia tokony hojerena tanteraka ka hapetraka aminn-ny fokom-pirenena. Nanomboka tamin’ny 2016 dia namory an’ireo raiamandreny lehibe mitantana ny foko 22 eto Madagasikara. Ka efa nalefa any amin’ny fitondram-panjakana mahefa ny taona vaovao nifanarahan’ny foko rehetra mba hankatoavin’ny minisitera sy ny Antenimieram-pirenena ary ny fitondram-panjakana manontolo ny taom-baovao iraisan’ny foko rehetra eto Madagasiksara ka hatao ho fetim-pirenena Malagasy. Mety amin’ny fanapahankevitra demokratika ihany koa no hanendren’ny fanjakana an’izany ary ho eken’ny foko 22. Ny ilaina dia misy daty tokana hankalazana ny taom-baovao Malagasy. Tsy miova anefa na izany azy ny fanatanterahana ny vovonan’ny foko 22 ho tarihan’ny KMTM “Komity Mpanomana ny Taombaovao iraisan’ny Malagasy”, manana ny tanjona hanaovana ny taom-baovao iraisana ho ny 22 septambra isan-taona, izay ho tanterahina any Toamasina amin’ny 22 septambra ho avy izao.